Maxaad Ka Taqaanaa Dalka Yar Ee Ku Dhawaaqay In Uu Isku Xukumayo Shareecada Islaamka? - Waadinews | Somali News and Entertainments
Maxaad Ka Taqaanaa Dalka Yar Ee Ku Dhawaaqay In Uu Isku Xukumayo Shareecada Islaamka?
Brunei (Barunay) Waa dal yar oo ku yaalla jasiiradda Borneo ee dhinaca woqooyi bari ee qaaradda Aasiya, waxa uu xuduud la wadaagaa badda badda Koonfureed ee Shiinaha iyo dalka Malaysia. Dhulka: Baaxadda dhulka ay ku fadhido Brunei waxaa lagu qiyaasaa ilaa 5,765 Kiiloo Mitir oo Isku wareeg ah. Caasimadda Brunei waxaa la yidhaahaa Bandar Seri Begawan. Dadka: Qiyaas la qaaday bishii July 2018 ayaa ku qiyaastay tirada dadka ku nool Wadankan ilaa 450,565 (Afar boqol iyo kontan kun, shan Boqol iyo shan iyo lixdan), Celceliska cimri-dheerida reer Brunei ayaa gaadhaya 77.5 sannadood.(Haweenka 80 Sannadood Ragga 75.2 Sannadood).
Luuqadda: Luuqadaha rasmiga ah ee dalkan lagaga hadlaa waa Malay, Afafka kale dalkan laga hadlo waxaa ka mid ah English iyo Chinese. Diinta: dadka ku dhaqan waddankan boqolkiiba 78.8 waa Muslimiin Sunni ah. Kiristaankuna waa 8.7 boqolkiiba. Dad lagu qiyaasay boqolkiiba 7.8 ayaa aamisan Buddhist. Nidaamka dawladnimo: Dalka waxaa ka jira nidaam boqortooyo ah. Brunei waxa gumaystay Ingiriiska oo ay xorriyaddeeda ka qaadatay 1 January 1984. Dhaqaalaha: Brunie waa mid ka mid ah waddamada u hodansan dalalka Islaamka, Dhaqaalaheedu dalkani waxa uu si laxaad leh ugu tiirsan shidaalka iyo Gaska dabiiciga ah, iyaga oo boqolkiiba 65 uga dhigma wax-soo-saarka dalka, sidoo kalena 95% uga dhigma waxyaabaha u dalkani dibadda u dhoofiyo.
Wax soosaarka Dalkan waxaa lagu qiyaasay sannadkii 2017-kii ilaa 33.87 bilyan oo Dollar. Haddii dhaqaalaha dalka si saman loogu qaybiyo shacabka waxaa qofkiiba ku soo hagaagaya sannadkii 78,900 oo Doollar. Dalka Brunei ayaa si weyn looga hadal hayay caalamka kaddib markii dalkaasi lagu soo roggay ku dhaqanka shareecada Islaamka islamarkaasna la ciqaabayo ciddii geysata dambiyada sida Sinada. Caasimadda Brunei, waa Bandar Seri Bagawan, waa magaalo xasiloon, waxaana ku yaalla misaajido waaweyn oo lagu xardhay qoraallo luqadda Carabiga ah oo dhaldhalaya, waxaana sidoo kale lagu arkaya waddooyika magaalada sawirka hoggaamiyaha dalkaas, Suldaan Xasan Al Bolkiah.
Dalkan waxaa uu ka mid yahay dalalka yar ee weli uu ku hadhay nidaamka ku salaysan dhaxaltooyada maamulka ee adduunka, Suldaanka waxaa uu awood ku leeyahay baarlamaanka dalkaas. Suldaan Xasan Al Bolkiah hadda waxaa uu isku hayaa jagooyinka kala ah, Ra’iisul wasaaraha, wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka gaashaadhigga, wasiirka maaliyadda iyo hoggaamiyaha arrimaha islaamka dalka Brunei. Dalka Brunei, looma ogolo inay ka howlgalaan mucaaradka iyo dadka madaxabannaan ee u doodo bulshada rayidka tan iyo markii uu xoriyadda dalkaas qaatay, waxaa dalka ka taagan xaalad degdeg ah tan iyo sannadkii 1962-dii taas oo mamnuuceysa xoriyatul qowlka.
Related Topics:BruneiShareecada Islaamka
Waddan Ay Qaramada Midoobay Ugu Digtay Ku Dhaqanka Shareecada Islaamka